Gelbiskii Geerida- Q4aad - Abdikadir AskarAbdikadir Askar
Waxa ay ahaayeen koox arday qurbaha ku kortay ah oo jecel dhaqanka diinta Islaamka ah. Marar badan ayay si wada-jir ah uga codsadeen maamulka jaamacaddooda in la siiyo goob ay ku tukadaan salaadaha xilliga ay waxbarashada ku jiraan. Taas oo markii danbe loo yeelay dalabkoodii.
In kasta oo Abshir arrintaas fekerkeeda lahaa, haddana asxaabtiisu gaar ahaan kuwa Suudaan ka yimid waxa ay u qaabaysnaayeen koox abaabulan. Waxa ayna xubno ka ahaayeen urur- diimeed ka jiray dalka Kanada oo lagu magacaabi jirey Xisbul-Janna.
Waxa aan dareemi jiray is-beddelka qofnimada iyo damiirka Abshir taabtay. Wuxu mar kasta sidan jiray kutub diiniya oo af- ingiriis ku qoran. Markii hore, isna nama shiddayn jirin anaguna hawl kuma aanu yeelan jirin. Maalin danbe ayaan si weyn iskugu dhacnay, kadib markii uu amar siiyey hablihii aanu walaalaha ahayn, kuna qasbay in ay dhar asturan xidhaan iyo weliba indho- shareer. Aniga oo u arkayey badownimo iyo in uu ku xad-gudbayo rabitaankoodii shaqsi iyo xaqooda doorasho.
Maalintaas aad ayaan iskugu buuqnay labadaydu. Walaalkay wixii intaas ka danbeeyey ma uusan jeclaysan jirin la sheekaysigayga, waayo wuxu ii arkayey qof dhaqanka reer galbeednimadu ku fogaatay oo aan dan iyo muraad ka lahayn in nolosha lagu asteeyo asluub diimeed.
Abshir, wuxu si aayar-aayar ah iskugu beddelay qof aammusan oo aan cidnaba wax ku darsan, gaar ahaan marka uu guriga nala joogo. Wuxu isku mashquulin jiray daawashada telefishanada waddamada Carabta gaar ahaan Telefeshinka Al jazeera oo uu aad ugu kalsoonaa soo-tebintooda wareed ee dunida Islaamka ah.